I Warren Kizza Besigye Kifefe dia mpitsabo sy mpanao pôlitika ogandey, kôlônely tao amin' ny tafika ogandey. Nilatsaka hofidina tamin' ny fifidianana filoham-pirenena tamin' ny taona 2001 sy 2006 izy. Teraka tao Rukungiri tamin'ny 22 Avrily 1956 izy. I Winnie Byanyima no vadiny.
Isan' ny mpanorina ny antoko Mouvement patriotique de l'Ouganda, izay resy tramin' ny fifidianana tamin' ny taona 1980, i Kizza Besigye. Nisahana ny asan' ny mpitsabo manokan' i Yoweri Museveni izy ary lehiben' ny Armée nationale de résistance nandritra ny ady teo anelanelan' ny taona 1980 sy 1986. Nihatakataka an' i Yoweri Museveni i Kizza Besigye ka nilatsaka ho mpanohitra azy tamin' ny fifidianana natao tamin' ny taoana 2001. Resy tamin' ny vato 28 % izy ary lasa lehiben' ny mpanohitra an' i Museveni. Tamin' ny 14 Novambra 2005 izy dia nosamborin' ny pôlisy noho ny antony ara-pôlitika. Tamin' ny fifidianana natao tamin' ny 23 Febroary 2006 dia nahazo ny laharanan faharoa tao aorian' i Yoweri Museveni tamin' ny vato 37,3 % i Kizza Besigye. Tao amin' ny antoko Forum pour le changement démocratique (FCD) izy.
Tamin'ny volana oktobra 2021 dia nisafidy ny tsy nilatsaka hofidina filoham-pirenena i Besigye tamin'ny fifidianana ho avy, ary nilaza fa hitarika ny mpanohitra amin'ny drafitra 'B' hitondra fanovana eto amin'ny firenena. Izy dia hiara-dia amin'ny mpanohitra lehibe an'i Museveni Bobi Wine hanampy azy handresy amin'ny fifidianana 2021.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kizza_Besigye&oldid=1039062"
Voaova farany tamin'ny 17 Oktobra 2021 amin'ny 22:45 ity pejy ity.